နှလုံးသား ဒိုင်ယာရီ: မောင်နဲ့ အတူတူ
Posted by မိုးနတ်ကြယ်စင် at 5:13 AM
တောက်ပကြယ်စင် October 3, 2012 at 5:47 AM
"မောင် အတူတူနေကြရအောင်နော်...မောင်..."မေဆွိသူချင်းကို သတိရမိလို့ ဆိုပြလိုက်တာ။ စာသားလေးတွေ ကောင်းတယ်။ လမင်းကြီးနဲ့ကြယ်လေးတွေတောင် ရှက်လို့ နေမလားဘဲတဲ့။ မိုက်တယ်။
လေပြေချို October 3, 2012 at 8:25 AM
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် October 3, 2012 at 7:16 AM
အက်ဆေးပုံစံမျိုးလေး ခံစားလို့ကောင်းတယ် ။
kiim October 3, 2012 at 7:18 AM
(တကယ့်ခံစားချက်ဆိုရင်ပေါ့လေ.. ) :D
Sweety Snow October 3, 2012 at 8:03 AM
.မောင်မက်မောတဲ့ ကျွန်မ မနှစ်သက်တဲ့ ဂုဏ်ပကာသနတွေကို ချန်ရစ်လို့ ရင်ခုန်စရာကောင်းတဲ့
အက်ဆေးပုံစံရေးထားတာလေး ကြိုက်တယ်.. ခံစားမှုတစ်မျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့
လေပြေချို October 3, 2012 at 8:27 AM
မောင်ရေ အဲ့ဒိလောက်တောင်ချစ်ရသည်ပေါ့.. ဟုတ်တယ်ဟုတ် :)
အသဲလေးတွေနဲ့ဆောက်ထားတဲ့အိမ် October 3, 2012 at 9:48 AM
ချစ်စံအိမ် October 3, 2012 at 10:58 AM
mstint October 3, 2012 at 6:52 PM
စိတ်ထဲပေါ်လာတာလေး ချရေးလိုက်တာတောင် နူးညံ့တဲ့ဆောင်းပါးလေးတစ်ပုဒ် ဖြစ်သွားတာပါလား မိုးနတ်ရေ။
ရိုးမြေကျ October 3, 2012 at 8:52 PM
မိုးနတ်လေးရဲ့ရင်ဖွင့်စာလေးဖတ်ပီး ကြည်နူးဖွယ်အပြာရောင်နေ့ရက်လေးတွေပိုင်ဆိုင်ရပါစေလို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်။
ရိုးမြေကျ October 3, 2012 at 9:30 PM
မြတ်နိုးသူ October 4, 2012 at 2:42 AM
.ရာဇ၀င်တွင်မဲ့ ကျွန်မတို့ အချစ်တွေ ဂန္တ၀င်မြောက်ဖို့...မောင်မက်မောတဲ့ ကျွန်မ မနှစ်သက်တဲ့ ဂုဏ်ပကာသနတွေကို ချန်ရစ်လို့ ရင်ခုန်စရာကောင်းတဲ့
အပြာရောင်နေ့ရက်တွေဆီကို အခုပဲ သွားကြပါစို့.အမမိုးနတ်ရေစကားလုံးတိုင်းကအရမ်းလန်းတာပဲ
စံပယ်ချို October 4, 2012 at 5:39 AM
မိုးနတ်ရဲ့ ရင်တွင်းကလာတဲ့စာသားလေးတွေ ကြိုက်တယ်
တရေးနိုးလို့ ထကြည့်မိတိုင်း မောင့်ရင်ခုန်သံဟာ ကျွန်မနဲ့ အနီးဆုံးဖြစ်လို့နေမယ်..၊. သန်းခေါင်ယံထက်နက်တဲ့ညမှာ
မောင့်မျက်နှာကို.. ကဗျာတစ်ပုဒ်လို.. ဖတ်ကြည့်ရင်း တိတ်တခိုးများ နမ်းလိုက်မိရင် ကောင်းကင်ပေါ်က လမင်းကြီးနဲ့ ကြယ်လေးတွေ----------------
နွေမိုး October 4, 2012 at 10:11 AM
ချစ်သူရင်ခွင် October 4, 2012 at 10:49 AM
ကိုတူး October 4, 2012 at 11:59 PM
ချမ်းမင်းကို(ပဥာက်) October 5, 2012 at 2:06 AM
ကိုမျိုး (အညာမြေ) October 5, 2012 at 7:27 PM
နှလုံးသား ဒိုင်ယာရီ ထဲက "မောင်နဲ့အတူတူ" ဆိုတဲ့ စာမျက်နှာလေး ဖတ်ရှု့ခဲ့တယ်။ ဆက်ပါအုံးနော်။ ဒိုင်ယာရီထဲမှာ နှလုံးသား ကဗျာလေးတွေ ရေးပါအုံး...
အိမ်မက်ကောင်းကင် October 5, 2012 at 10:14 PM
အပြာရောင်နေ့ရက်တွေဆီကို အခုပဲ သွားကြပါစို့.........." တဲ့
Nwai La October 6, 2012 at 1:53 AM
အခုချိန်မှာ အချစ်ဆိုတာ အလကားပဲ ထင်နေမိတယ်
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! October 6, 2012 at 11:23 AM
yatuthit October 6, 2012 at 12:06 PM
မိုးသူ(တောင်ကြီး) October 7, 2012 at 7:34 PM
မိုးနတ်ရေးတဲ့ မောင်ဖတ်မိ၇င်တော့ အဲဒီတယောက်ရဲ့ ခံစားချက်က ဘယ်လိုနေမယ်မသိဘူး
မိုးသူတော့ ကြည်နူးခြင်းတွေအများကြိးနဲ့ ဖတ်ရှုခံစားသွားပါတယ်
မိုးသူရဲ့ ဘယ်ဖက် အခြမ်းကို တိုက်ရိုက်လှုပ်ခပ်သွားစေတဲ့စာလေးတပုဒ်လို့ ပြောရင်တောင်လွန်မယ်မထင်ဘူး
ဖတ်ရင်းနဲ့ စိတ်ကူးလေးတွေယဉ်ပြီး စိတ်ထဲမှာဘ၀င်ကျစွာပျော်ရွှင်သွားတယ်
မောင်ဆိုတာ ဖတ်မိတိုင်း စိတ်တိတ်တွေက အတိတ်တွေဆီရောက်ရောက်သွားတယ်
သူလည်း တအားချစ်တာပါပဲ..ဒါပေမယ့် နီးစပ်သူနဲ့ သာယာတာပါပဲလေ..မောင်ဆိုတာ ပုံပြင်ထဲထားခဲ့ခံရတယ်..
မိုးနတ်ကြယ်စင် October 8, 2012 at 4:09 AM
မိုးနတ်ရဲ့စာကို ဖတ်မိတာ..မောင့်ကို စိတ်မကောင်းစရာတွေ
တကယ်က မိုးနတ်မှာ မောင် လို့ခေါ်ရမဲ့သူမရှိဘူးရှင့်..
witch83 December 29, 2012 at 4:03 PM
Essay လေး ရေးထားတာ ကောင်းတယ်။ ဒါတွေကို သူသိပါစေလေ.. :)